करियर - साप्ताहिक
युवराज गौतम, असार ३१, २०७६
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्ले हालसम्म प्राविधिक एसएलसी तह र तीनवर्षे डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहका कोर्सहरू सञ्चालन गरेको छ । भर्नाका लागि छनौट हुन अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ । प्रवेश परीक्षामा सामेल भएर प्रतिस्पर्धाका आधारमा तोकिएको कोटामा विद्यार्थी छनौट गरिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
हरेक आमाबाबुका लागि सन्तानको शिक्षादीक्षा सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हुन्छ । कहाँ पढाउने ? कस्ता शैक्षिक संस्था राम्रा हुन्छन् ? कस्तो वातावरणमा सन्तानले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सक्छन् ? यी र यस्ता विविध प्रश्न आमाबाबुमा उब्जिइरहेको हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
पहिलो कुरा आफू कुन विषयमा अब्बल छ सोही अनुसारको कलेज हेर्नुपर्छ । विभिन्न टेक्निकल कलेजहरू छन्, आफू जेमा सक्षम हो सोही विषयमा दक्षता हासिल गर्न सकिने शैक्षिक संस्था छान्नुपर्छ । ठूला र आकर्षक सुविधाले मात्र कलेज राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्दैन । मुख्यत व्यवहारिक ज्ञान, सीप र संस्कार सिकाउन सक्ने शैक्षिक संस्था नै राम्रा हुन । पुरा पढ्नुहोस्
शैक्षिक संस्थालाई मापन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कसी नतिजा हो । यसलाई दुई ढङ्गले केलाउन सकिन्छ । वार्षिक परीक्षाको नतिजा र +२ पछिको अध्ययनमा विद्यार्थीले मेडिकल, इन्जिनियरिङ, सीए, कृषि विज्ञान आदिमा हासिल गरेको छात्रवृत्ति । यी दुवैमा ओमेगाको अवस्था उच्च र सुदृढ छ । पुरा पढ्नुहोस्
राजाराम पौडेल, वैशाख १५, २०७६
यहाँ बालबालिकाले आफूमा अन्तर्निहित प्रतिभा बाहिर ल्याउने प्रयास गरे । स्कुल बिदाको समय त्यसै खेर नजाओस् भनेर उक्त तालिमको आयोजना गरिएको हो । अन्य समयमा स्कुलको पाठ्यवस्तुमा सीमित हुँदै आफ्ना रहर र आफूमा अन्तर्निहित क्षमता बाहिर ल्याउन नपाएकाहरू उत्साहपूर्वक प्रशिक्षणमा सहभागी भए । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , माघ १७, २०७५
जागिरका लागि व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) अनिवार्य हुन्छ । बायोडाटा बनाउनुअघि कस्तो कम्पनीले कस्तो बायोडाटा भएका कर्मचारी खोजेका छन् पहिल्याउन सक्नुपर्छ र सोही अनुसार बायोडाटा तयार गर्नुपर्छ । रोजगारीको पहिलो पाइलाका रूपमा रहेको बायोडाटा आकर्षक बनाइए रोजगारी प्राप्त गर्न सहज हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
लोकसेवाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीले व्यवहारिक पक्षका बारेमा धेरैभन्दा धेरै जानकारी हासिल गर्नुपर्छ । विभिन्न तहका निजामती कोर्समा सरकारको नयाँ नीति, नियम, ऐनहरू समावेश हुँदैन । त्यसैले निजामती ऐन, नियम, कानुन जान्नुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , पुस १२, २०७५
ककटेल र मोकटेल बनाउने विधीमा खास अन्तर छैन । यद्यपि ककटेलजस्तै अल्कोहलिक वेबरेज मोकटेलमा प्रयोग हुँदैन । ननअल्कोहलिक वेबरेजको मिश्रणबाट तयार हुने पेय पदार्थ नै मोकटेल हो । मोकटेल र ककटेलबीच खास अन्तर भए पनि त्यसलाई बनाउने, सजाउने र पस्कने शैलीमा एकरुपता हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
मैले अडिसनमा किशोर कुमारको अगर तुम ना होते गाएको थिएँ । त्यसपछि मैले स्टेजमा चलचित्र खुबसुरतको गीत गाएँ । मेरो गीतलाई सबैले मन पराइदिनुभयो, जसले गर्दा सांगीतिक क्षेत्रमा होमिन थप हौसला मिल्यो । पुरा पढ्नुहोस्
राजाराम पौडेल, पुस ३, २०७५
फस्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन लिनुपर्छ । आफू जाँदै नगएकाले जानकारी दिँदा वास्तविकताभन्दा पर हुन सक्छ । त्यसैले अनुभवी काउन्सिलरको सहयोग लिनुपर्छ । हामी अभिभावकलाई सीधै भन्छौं विदेश जान रमाइलोचाहिँ हुन्छ, तर सुख चाहिँ हुँदैन । हामी भन्छौं, नेपालमा सुख छ तर नेपालको सुखले खुसी दिइरहेको छैन । पुरा पढ्नुहोस्